रातको १ बजे कोठामा आएर भनि, ‘मलाई चाहियो’ – PathivaraOnline
Home > रोचक > रातको १ बजे कोठामा आएर भनि, ‘मलाई चाहियो’
admin September 12, 2018 March 16, 2020 रोचक, समाज 0
उ कुर्ता सुरुवाल लगाउँथिन्र । त्यो पनि यति टिपिक्क कि शरिरको रुपरेखा सर्लक्क छुट्टिने, सबै चिज पुट्ट, वयस्क अनि विकसित भएका। उसको कालो कपाल, अनुहारबाट कान पछाडी सरक्क सार्थी। वैंशालु आँखा, चट्ट मिलेका आँखी भौ। रसिलो ओठ, सेता लामा घाँटी। पुट्ट उठेका छाती। अनि तिनै स्तन अड्याउन लगाएकी ब्राको सेतो स्ट्राइप दुवै कुम हुँदै बाँधिएका देख्दा उसमा जवानीले आफ्नो पुरै रुप देखाएझै लाग्थ्यो। म छड्के हेर्थे ।
घरकी एक्ली छोरी । सबै चिज पुगेकाले होला उसका सबै पुष्टिएका थिए। दिन बिराएर छतमा उक्लने सिढीँको सबैभन्दा माथी लामा खुट्टा सिढीमा राखेर झुकेर नङमा पालिस लगाउने गर्थि। छनक पाएपछि म माथी उक्लन्थे। उसका स्तन सरक्क तल सर्दा तलैबाट उसको कुर्ता भित्रका उठेका भाग छचल्किन्थे। म बिस्तारै सिढी चढ्थे। उ बाटो छोडिदिन्थी। उसको समिपबाट कटेर जाँदा उसको बास्नाले आनन्दित पार्थ्यो, उत्तेजित हुन्थेँ।
केही बेरमा उ छतमै आउँथी। गफिन्थि, मुस्काउँथी, मस्किन्थी, चिढिन्थी। म उसलाई जिस्काउँथे।‘के खाएर तिमी यस्ती साह्रै राम्री भएकी?’‘स्याउ’ उ जिस्किन्थी।‘त्यहि भएर रहेछ स्याउ फलेका’, उ लाजले रातो हुन्थी।उ मोबाइलमा व्यस्त हुन्थी। छतमा बसी तल रोड तिर हेर्दै फेसबुक चलाउनु उसको दैनिकी भएको थियो।शनिबारको दिन छत भरी कपडा सुकाएको हुन्थ्यो। छतको एउटा कुनाबाट अर्को तिर सबै छोपिने। कपडा छल्दै छतमाथी डुल्दै गर्दा कुनामा मोबाइल चलाउँदै भेटिन्थी।‘कस्तो कुनामा लुकेकी?’‘कसैले देख्दैन नि त यहाँ?’‘के फाइदा त कसैले नदेखेपनि, केही गर्ने होइन तिमी, खाली मोबाइल नै चलाएर बस्ने त हो।’‘के थाहा?’ उ मस्किन्थी।
मलाई खुब मन पर्थ्यो। उसका हिडेका चाल, बोल्ने स्टाइल अनि आखाको इशारामा लठ्ठ हुन्थे। उ पनि मसंगै खुबै बोल्थी। ठूला ठूला कुरा गर्थी। छतमा बस्दा रोड हिडिरहेका केटीहरुको चालमा केमन्ट गर्थी। ‘छ्या कस्तो हिडेका होला? म पनि यस्तै देखिन्छू हो पछाडीबाट हेर्दा?’
‘क्याट वाक गरेको जस्तो हिड्छौ, सेक्सी देखिन्छौ।’ उ मुसुक्क हाँस्थी।उसका कुरा १९ पुगेका केटीका जस्ता हुन्थेनन्। कुराले जित्नै मुस्किल। त्यसैले उसको प्रतिवाद गर्थिन। तर प्रंसशा धेरै गरेपछि भने उसंग कुरा गर्न रुचाउँथी।‘रोमी आइ लभ यु!’, छतमा एक दिन प्रपोज गरे।उ केही बोलिन। छतको डिलमा पाखुरा अड्याएर हातमा मोबाइल ओल्ट्याइ पल्ट्याइ गर्दै रोड तिर एकटकले हेर्न थाली।
‘आइ लाइक यु बट् आइ हाभ ए व्वाइफ्रेन्ड।’ म झसंग भए। बरु सिधैँ नो भनेको भए त्यस्तो लाग्दैनथ्यो। उसको व्वाइफ्रेन्ड छ भन्ने कल्पना पनि गरेकी थिइन। उ कलेजबाट फर्केपछि घरमै बस्थि, बाहिर धेरै डुल्ने भएको भए मैले गेस गर्थे पनि होला।उ निराश मुद्रामा रोड तिरै हर्दै थिए। उ सरासर छतबाट ओर्ले।
केही दिन उसंग बोलिन। पछि उ आफै बोल्न थाली। मेरो कोठामा पहिले नआउने उ अब आउन थालेकी थिइ। उसको व्वाइफ्रेन्ड भयो त के भयो, भेट्न गएको देख्दिन। बालै भएन। उसको प्रशंसा त मै गर्छु, रातभरी फोनमा कुरा त मै गर्छु। उसंग फोनमा निकै कुरा हुन सुरु भएको थियो। उसको प्रशंसा गर्थे। उ अझै उत्साही हुन्थी।
‘जब तिमी टाइट लुगामा तल झर्छौ तब काउकुती लगाउँछौ, यस्तो सेक्सी देखिन्छौ, झम्टन मनलाग्छ’‘कस्तो सेक्सी’, फोनमा उ साउती मार्थी।‘तिम्रो चाल, आंखा अनि तिम्रो फुर्र उड्ने कपाल, तिम्रो छाती।’ म रोक्किन्थे।‘अनि…’ उ फोनबाटै उत्तेजित हुन्थी।‘तिम्रो घाँटी पछाडी हात लगि कपाल खेलाउँथे होला।’
फोन काटियो। ब्यालेन्स जिरो पुगेछ। मिस कल समेत गएन। पर्खिरहेँ। रातको १ बजे उ माथीबाट झरी। हत्तपत्त फ्ल्याट बाहिर पुगेर अनि उसका कोमल हात तानेर भित्र ल्याएँ। उ खुरुखुरु आइ।
‘मलाइ चाहियो…’, उसले घम्लङ्ग अंगालो हाल्दै भनी।
पहिलो पटक उसको शरिरको अति मनमोहक बास्ना लामो स्वासमा ताने। उ तातेकी थिइ। ‘मज्जा हुने रहेछ, पहिल्यै गर्नु पर्ने, बेक्कार नो भनेको’
‘के नो भनेको?’
‘आई लभ यु!’
‘आई लभ यु टु, रोमी’
देवर भाउजुको यौन लिलाको भिडियो सार्वजनिक ,उमेर पुगेकाले मात्रै हेर्नुहोला
… त्यसपछि उनलाई २२ बर्षिया युवतीको यस्तो जिच निकालेर खुवाइयो!
ससुराले कुट्ने र श्रीमान‍्ले भिडियो बनाएको घटना भाइरल बन्दै!